Vaovao - nomerika HUIZI nomerika Shanghai
Tsy maninona ny manao hoho raha mbola bevohoka?
Ankehitriny, mahafinaritra ny vehivavy. Ankoatry ny fiheverana ny makiazy sy ny taovolo, dia miahiahy kokoa momba ny fikolokoloana hoditra sy ny hatsaran-tarehy ary ny manicure izy ireo. Efa lasa lamaody izao ny zava-kanto. Ny zavakanto nohomboana dia afaka manova ny tananao ary hahatonga azy ireo ho tsara kokoa. Mazava ho azy fa afaka manao taokanto ny vehivavy, koa mbola afaka manao taokala ve izy ireo aorian'ny fitondrana vohoka?
Afaka manana kanto nohomboana ve ny ankizy?
Afaka manana kanto fantsika ve ny ankizy? Eny ny valiny. Nail art efa ela no hita ho toy ny kilalao olon-dehibe sy fitaovana mahomby ho an'ny olon-dehibe amin'ny fikatsahana hatsaran-tarehy. Fa mila filantsika hoho ihany koa ve ny ankizy? Saingy noho ny antony ara-pahasalamana dia mila mitandrina kokoa isika amin'ny vokarin'ny ankizy mba hahazoana antoka fa azo antoka sy tsy misy poizina izy ireo.
Ahoana no hanombohana ny orinasanao fantsika?
Tamin'ny fisandratan'ny onjan'ny mpandraharaha dia nanomboka nieritreritra ny fomba fananganana orinasany ny olona. Na izany aza, ny fanombohana orinasa dia dingana sarotra iray izay mitaky ezaka mafy, fahatokisana ary fahaleovan-tena. Tsy misy vahaolana tokana manome toky ny fahombiazana eo noho eo, fa ianao dia mbola afaka mahazo tari-dàlana manokana izay hanampy anao amin'ny fihoaran'ny dingana ilaina., mifanakalo hevitra momba ny fomba hanombohana salon ianao - tokony handamina mialoha ianao, hanomana drafitra fandraharahana, hanokana teti-bola, hanatonana ny mpanjifa voalohany, sns.
Tao amin'ny Nail Wraps no nitrangan'ny revolisiona
Ny lamina dia voninkazo sy lolo kely. Mila ampiasaina amin'ny poleta fantsika izy io. Tsy fantatra ireo akora ao anatiny ary misy plastika misy poizina. Mora izany. Fa ny viscosity amin'ny ankapobeny tsy dia tsara loatra, mora mipoaka. Low saturation ny lamina. Mila miankina amin'ny teknolojia manicurist, ary matetika ny vokany dia tsy tsara araka ny nampoizina.
Torohevitra HUIZI Services-APPOINTMENT
Ny pediky "menaka esono" dia tena misy menaka aromatherapy, mandio anaty, manadio ny fantsika, manapotipotika, manadio siramamy, manotra, ary poloney aorian'ny fampiasana azy dia madio ny hoditra, tsy maina fa miaraka amin'ny zavamaniry dite manitra manitra.
2021 Nails Art Top 10. Iza no hofidinao?
Nandalo lalana ny ampahatelon'ny 2021, mbola taona tsy mahazatra tsy isalasalana. Tsy tianay ny fizotran'ny fisafidianana amin'ireo rindrina feno felaka fantsika amin'ny salon fantsika, Ary tsy tokony hamporisika ny hamoaka tavoahangy am-polony maro izahay mba hananana be dia be. safidy azo isafidianana ao an-trano. Fa kosa, manoro hevitra izahay ny famolavolana fametaka fantsika gel izay ho be mpitia indrindra amin'ny taona, mba hahafahan'ny rantsan-tànanao mandeha foana. Mba hahatonga ny fotoana hoho hahafinaritra indrindra araka izay tratra.